Stockholm waa magaalada ugu fiican Iswiidhan | Somaliska
Cilmi baaris uu sameeyay wargeyska Svenska Dagbladet ayaa soo bandhigtay in magaalada Stockholm ay tahay magaalada ugu fiican Iswiidhan xaga nolosha marka loo barbar dhigo magaalooyinka waaweyn sida Malmö iyo Göteborg. Dadka ku nool magaalada Stockholm ayaa ka nolol fiican dhigooda magaalooyinka kale ayagoo lacag badani soo gasho, ka caafimaad fiican kana shaqo badan. Sadexda magaalo ee ugu waaweyn Iswiidhan ayaa Stockholm waxay noqotay mida ugu soo dhaweynta fiican dadka soo galootiga iyadoo dadkeedu aad u taageeraan nidaamka cayrta. Balse caasimada ayaa sadex meelood uga liidadata magaalooyinka kale sida dambiyada, gabdhaha da'da yar ee uurka leh iyo dadka u dhinta cabida qamriga.
Cilmi baaris uu sameeyay wargeyska Svenska Dagbladet ayaa soo bandhigtay in magaalada Stockholm ay tahay magaalada ugu fiican Iswiidhan xaga nolosha marka loo barbar dhigo magaalooyinka waaweyn sida Malmö iyo Göteborg.
Dadka ku nool magaalada Stockholm ayaa ka nolol fiican dhigooda magaalooyinka kale ayagoo lacag badani soo gasho, ka caafimaad fiican kana shaqo badan.
Sadexda magaalo ee ugu waaweyn Iswiidhan ayaa Stockholm waxay noqotay mida ugu soo dhaweynta fiican dadka soo galootiga iyadoo dadkeedu aad u taageeraan nidaamka cayrta.
Balse caasimada ayaa sadex meelood uga liidadata magaalooyinka kale sida dambiyada, gabdhaha da’da yar ee uurka leh iyo dadka u dhinta cabida qamriga.